Casharka Fidiyowga: Saamaynta Dhuxusha ee Adobe Photoshop + Xirmooyinka Bilaashka ah ee Burushka | Abuurista khadka tooska ah
Casharro Video ah: Saamaynta Dhuxusha ee Adobe Photoshop + Xirmooyinka Bilaashka ah ee Bilaashka ah
El dhuxusha waxay bixisaa natiijooyin leh noocyo badan oo codad ah oo daboolaya khiyaanada ugu jilicsan tan ugu madow, ugu qoto dheer uguna adag. Waa shey lagu gartaa deggenaasho la’aantiisa sidaa darteedna wuxuu noqdaa cunsur si fudud loo qaabeyn karo iyada oo la mariyo farta ama xoqida. Tani waxay ahayd farsamadii ugu horreysay ee nin u adeegsado sawir qaadista maantana waxay weli ku jirtaa gacanta farshaxanno garaafyo ah. Maanta, waxaan haysannaa suurtagalnimada helitaanka natiijo aad u macquul ah oo la socota codsiyada naqshadeynta iyo khalkhalgelinta sawirrada dhijitaalka ah.
Fiidiyowga maanta waxaan arki doonnaa sida aan u adeegsan karno kuweenna dhuxusha ayaa laga helayaa barnaamijka Adobe Photoshop. Tan waxaan ku ciyaareynaa qalabka lakabyada hagaajinta (gaar ahaan midka loogu talagalay motifs) waxaan sidoo kale isticmaali doonaa xirmo burush ah oo gaar ah (Waxaad uga soo dejisan kartaa bilaash boggan) taasi waxay naga caawin doontaa inaan qoraal ka sameysano, si aan u helno natiijo macquul ah oo 100% ah. Farsamada aan raaci doono waxay noqon doontaa waxyaabaha soo socda:
Waxaan soo dhoofsan doonnaa sawirkeena oo aan siin doonnaa farqiga sare iyada oo loo marayo qalooca iyo hagaajinta heerka haddii aan u aragno inay lagama maarmaan tahay.
Waxaan abuuri doonnaa a lakabka hagaajinta qaabka oo waxaan dooran doonaa mid ka mid ah qaababka ku dayanaya xaashida warqadda.
Waxaan abuuri doonnaa a maaskaro lakabka sawirka asalka ah kuna rog rogo.
Ka dib waxaan ka dooran doonaa mid ka mid ah burushyada xirmooyinka aan ku ciyaareyno oo aan ku ciyaareyno daahfurnaan si loo abuuro waxyaalo is khilaafsan.
Waxaan u isticmaali doonaa qalabka soo bandhigid iyo daaweyn la’aan haddii aan u aragno inay lagama maarmaan tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Casharro Video ah: Saamaynta Dhuxusha ee Adobe Photoshop + Xirmooyinka Bilaashka ah ee Bilaashka ah
farshaxanka 1012 dijo
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa in aan sameeyo casharka laakiin xalayto waxaan soo dajiyay burushyo 4shared ah oo soo degsashadu waxay la timid matoor raadin, Mystartsearch, waa mid aad u kacsan, pc-ga ayaa ku sumoobay qaab arxan darada ah, wali waxaan la kulmayaa cawaaqib inkasta oo aan sameynayo wax kasta oo ay kula taliyeen, xitaa iyagoo isticmaalaya nadiifiye. Waxaan ka baqayaa inaan soo dejiyo.
Jawaab arteteresa 1012
Hello artteresa! Aad baad ugu mahadsantahay inaad na ogeysiiso, waxaan maanka ku hayn doonaa munaasabadaha mustaqbalka. Sikastaba, hadaad rabto, waxaan kuugu soo diri doonaa waxyaabaha ku jira xirmada emayl, haddii aad dhibaato hayso.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii soo degsashadu ay nabdoon tahay oo aan halista fayrasyada lahayn. Mahadsanid.
Xirmooyinka burush ee aad uga hartay fiidiyowga casharka ma jiraan kuwa aad u isticmaasho dhammaadka fiidiyowga, ma ii sheegi kartaa halkaad ka keentay, ama ma ii soo diri kartaa?
10 xaraf wordpress oo bilaash ah si loo hagaajiyo muuqaalka boggaaga
+ 20 noocyada filinka bilaashka ah